Kero Kumira 101: Mabhenefiti, Nzira, uye Mazano | Martech Zone
Nderini pawapedzisira kuwana kero dzese murunyoro rwako dzichitevera fomati imwechete uye dzaive dzisina kukanganisa? Never, handiti?
Zvisinei nematanho ese angatorwa nekambani yako kudzikisa kukanganisa kwedata, kugadzirisa nyaya dzemhando yedata - senge zviperengo zvisirizvo, nzvimbo dzakashaikwa, kana nzvimbo dzinotungamira - nekuda kwekunyora kwedhata - hazvidzivisike. Muchokwadi, Purofesa Raymond R. Panko mune yake rakabudiswa bepa yakasimbisa kuti zvikanganiso zve data respredishiti kunyanya zvemaseti madiki anogona kubva pakati pe18% ne40%.
Kurwisa dambudziko iri, kero yekumisikidza inogona kuve mhinduro huru. Iyi posvo inoratidza kuti makambani angabatsirike sei kubva mukumisikidza data, uye kuti ndedzipi nzira uye matipi avanofanira kufunga kuti vaunze zvakatarisirwa.
Chii chinonzi Kero Standardization?
Kumisikidzwa kwekero, kana kuti kero normalization, inzira yekuzivisa uye kufomatisa marekodhi ekero zvinoenderana neinocherechedzwa yeposvo sevhisi zviyero sezvakatarwa mudhatabhesi rine chiremera senge United States Postal Service (USPS).
Kero zhinji hadziteveri muyero weUSPS, uyo unotsanangura kero yakamisikidzwa seyo, inopereterwa zvizere, yakadimburirwa pachishandiswa chiyero chePost Service, kana sezviri kuratidzwa mune yazvino Post Service ZIP+4 faira.
Mitemo Yekutumira Kero
Kero dzekuenzanisa zvinova chinhu chinodikanwa kumakambani ane mazita ekero asingaenderane kana akasiyana mafomati nekuda kwekushaikwa kwekero (semuenzaniso, ZIP+4 neZIP+6 macode) kana nyora, casing, spacing, uye kukanganisa zviperengo. Muenzaniso weizvi unopiwa pasi apa:
Sezvinoonekwa kubva patafura, ese kero kero ine chikanganiso chimwe chete kana akawanda uye hapana inosangana nezvinodiwa zveUSPS.
Kero standardization haifanirwe kuvhiringika nekuenzanisa kero uye kusimbiswa kwekero. Kunyange paine zvakafanana, kusimbiswa kwekero ndeyekutarisa kana rekodhi rekodhi richienderana nerekodhi iripo kero muUSPS dhatabhesi. Kero yekuenzanisa, kune rumwe rutivi, ndeyekufananidza maviri akafanana kero data kuti uone kana ichireva chinhu chimwe chete kana kwete.
Zvakanakira Kuenzanisa Kero
Kunze kwezvikonzero zviri pachena zvekuchenesa data anomalies, kuenzanisa kero kunogona kupa huwandu hwemabhenefiti kumakambani. Izvi zvinosanganisira:
Sevha nguva yekusimbisa kero: pasina kuenzanisa kero, hapana nzira yekufungira kana rondedzero yekero inoshandiswa kune yakananga tsamba yemushandirapamwe yakarurama kana kuti kwete kunze kwekunge tsamba dzadzoserwa kana dzisina mhinduro. Nekugadzirisa kero dzakasiyana-siyana, nguva yakawanda yevanhu inogona kuchengetedzwa nevashandi vanosefa nemazana emakero etsamba kuti vaone chokwadi.
Deredza mari yekutumira: Mishandirapamwe yetsamba yakananga inogona kutungamirira kumakero asiri iwo kana asiri iwo ayo anogona kugadzira kubhadharisa nekutumira nyaya mumishandirapamwe yetsamba yakananga. Kumisikidza kero kuti uvandudze kuenderana kwedata kunogona kuderedza kudzoserwa kana kusatumirwa tsamba, zvichikonzera yakakwirira yakananga mhinduro dzetsamba.
Bvisa kero dzakapetwa: akasiyana mafomati nemakero ane zvikanganiso zvinogona kuguma nekutumira zvakapetwa kaviri maemail kune vanobatika anogona kuderedza kugutsikana kwevatengi uye chimiro chemhando. Kuchenesa mazita ekero yako kunogona kubatsira kambani yako kuchengetedza kutambisa mari yekuendesa.
Maitiro ekuisa maKero?
Chero kero yekujairisa kero inofanirwa kusangana neUSPS nhungamiro kuti ive yakakosha. Uchishandisa iyo data yakasimbiswa muTable 1, heino maitiro ekero data ichaonekwa pane yakajairika.
Kumisa kero kunosanganisira nhanho ina. Izvi zvinosanganisira:
Emesa kero: unganidza kero dzese kubva kune akawanda data zvinyorwa - seExcel spreadsheets, SQL dhatabhesi, nezvimwewo - mune rimwe bepa.
Profile data yekuongorora kukanganisa: ita data profiling uchishandisa kuti unzwisise chiyero uye mhando yezvikanganiso zviripo mune yako kero runyorwa. Kuita izvi kunogona kukupa pfungwa yakaoma yezvingangoitika dambudziko nzvimbo dzinoda kugadziriswa usati waita chero mhando yekumisikidza.
Chenesa zvikanganiso kusangana neUSPS nhungamiro: Kana zvikanganiso zvese zvaonekwa, unogona kuchenesa kero uye nekuimisa zvinoenderana neUSPS nhungamiro.
Ziva uye ubvise kero dzakafanana: kuti uone chero adhiro kero, unogona kutsvaga kaviri kuverenga muspredishiti kana dhatabhesi kana kushandisa chaiyo kana fuzzy enzanirana kubvisa zvinyorwa.
Nzira dzeKumisa Kero
Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekugadzirisa kero mune yako runyorwa. Izvi zvinosanganisira:
Manual Scripts uye Zvishandiso
Vashandisi vanogona kuwana nemaoko zvinyorwa zvekumhanya uye ma-add-ins kugadzirisa kero kubva kumaraibhurari kuburikidza neakasiyana
Coding repositories: GitHub inopa kodhi matemplate uye USPS API kubatanidzwa kwaunogona kushandisa kuonesa nekugadzirisa kero.
Application Programming Interfaces: Wechitatu-bato masevhisi anogona kubatanidzwa kuburikidza API kusiyanisa, kumisikidza, uye kusimbisa kero dzekutumira.
Zvishandiso zveExcel-based: add-ins uye zvigadziriso zvakaita seYAddress, AddressDoctor Excel Plugin, kana excel VBA Master inogona kukubatsira kutsanangura uye kumisa kero dzako mukati medatasets yako.
Mabhenefiti mashoma ekudzika nzira iyi ndeyekuti haina kudhura uye inogona kukurumidza kugadzirisa data kune madiki dataset. Nekudaro, kushandisa zvinyorwa zvakadaro zvinogona kudonha kupfuura zviuru zvishoma zvemarekodhi uye nekudaro hazvina kukodzera kune akakura kwazvo dataset kana ayo akapararira munzvimbo dzakasiyana.
Kero Verification Software
Iyo yekubvisa-pasherufu kero verification uye normalization software inogona zvakare kushandiswa kugadzirisa data. Kazhinji, maturusi akadai anouya aine chaiwo kero yekusimbisa zvikamu - senge yakabatanidzwa USPS dhatabhesi - uye ine kunze-kwe-iyo-bhokisi data profiling uye yekuchenesa zvikamu pamwe neasinganzwisisike maalgorithms ekumisa kero pachiyero.
Izvo zvakakoshawo kuti software ine CASS kutaura kuti ichokwadi kubva kuUSPS uye inosangana neinodiwa yechokwadi chikumbaridzo maererano ne:
5-manhamba kodhi - kushandisa iyo isipo kana isiri iyo 5-manhamba ZIP code.
ZIP+4 kukodha - kushandisa iyo isipo kana isiriyo ine manhamba kodhi.
Residential Delivery Indicator (RDI) - kuona kana kero iri yekugara kana yekutengesa.
Delivery Point Validation (DPV) - kuona kana kero inotumirwa pasi kune suite kana nhamba yefurati.
Enhanced Line Yekufamba (eLOT) - nhamba yekutevedzana inoratidza chiitiko chekutanga chekuendesa kunoitwa kune imwe yekuwedzera mukati menzira yekutakura, uye iyo inokwira / inodzika kodeti inoratidza kurongeka kwekutakura mukati meiyo nhamba yekutevedzana.
Inowanikwa Kero Conversion System Link (LACSLink) - nzira yeatomatiki yekuwana kero nyowani kumanisiparati emuno ayo aita 911 emergency system.
SuiteLink® inoita kuti vatengi vape ruzivo rwekugadzirisa bhizinesi nekuwedzera inozivikanwa yechipiri (suite) ruzivo kumakero ebhizinesi, izvo zvinobvumira USPS kutumira kutevedzana pazvisingazogoneke.
Mabhenefiti makuru ndekureruka kwaanogona kuona uye kumisa data kero yakachengetwa mumasisitimu akasiyana anosanganisira maCRM, RDBMs uye Hadoop-based repositories uye geocode data kuburitsa longitude uye latitude.
Kana zviri zvipimo, maturusi akadai anogona kudhura zvakanyanya kupfuura manyorero ekugadzirisa kero nzira.
Ndeipi Nzira Iri Nani?
Kusarudza nzira kwayo yekusimudzira mazita emakero ako kunoenderana zvachose nehuwandu hwemarekodhi ekero yako, tekinoroji stack, uye chirongwa chenguva.
Tags: +45-manhamba zip codekuchenesa kerokero deduplicationtaura chirembakugadzirisa kerokugadzirisa kerokusimbiswa kwekerokero verification softwareAPIcassdataladderDelivery point kusimbiswadpvelotmutsara wekufamba wakawedzerwaGitHublacslinkinowanikwa kero yekushandura system linkpostalprordirdrmpekugara kuendesa chiratidzosuitelinkisu posvo yebasauspsupss apichii chinonzi kero standardizationyaddresszipi kodhizipi kodhi
Fahad Fareed ndiye Chigadzirwa Marketing Manager pa Dare Dhata - inotungamira mubatanidzwa kugadzirisa uye data mhando software kambani. Achitora kubva muruzivo rwake rwekushanda muETL uye data mhando indasitiri, Fahad anonyora zvichangobva kuitika uye matipi evagadziri uye C-suite vatariri kuti avabatsire kuita zvirinani sarudzo dzekusvika pakuronga data.